Guriga > safarka Europe > Sida loo tabobaro Travel Sida Nomad A Iyadoo Europe
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 22/10/2021)
Waa maxay more, safraya tareen sida miyiga ah wuxuu leeyahay wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka kale. Waxaad ka heli in ay la kulmaan wax kasta oo waqtiga aad, iyo tareeno aad bixiyaan suurtagalnimada loo sameeyo si habsami ah oo aan mashaakil kasta. Waxaa laga yaabaa in gaabis ah mararka qaarkood, laakiin ma jirto stress in hab this ee safarka, halka diyaarado waa wax gebi ahaanba ka duwan. Haddii aad ku safarto diyaarad, waxaa jira stress si joogto ah buux- garoomada diyaaradaha iyo tallaabooyinka ammaanka overzealous. Waa maxay more, mararka qaarkood, waxaad heli doontaa si aad u socoto si dhakhso ah haddii aad qaado tareenka!
Wax kasta oo aad doorato safarka tareenka aad, wali waad awoodaa lacag badbaadin sidan.
Dhanka kale, haddii aad rabto in aad la kulmaan dadka deegaanka, waa in aad isticmaasho kooshka dabaasha, maxaa yeelay, sidaas waxaad heli doontaa in la joogo dadka deegaanka. Dheeraad ah, ay ka badan ayaa kuu sheegi kara magaalada ay ku saabsan iyo muujiyaan meelaha oo dhan madadaalo aad u qalantaa booqanaya.
Xusuusnow inaad iftiinka safarka. Haddii aad ku socoto in ay miyiga ah tareenka u safraya, aad leedahay doonaa waqti fudud oo kaliya siday waxa lagama maarmaan ah. Hostels bixiyaan wax badan oo ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah sida shukumaan, timo qallajiye, iyo wixii la mid ah, sidaa darteed uma baahnid in aad idinkaa keeno. Dheeraad ah, sida caadiga ah waxay leeyihiin Makiinadaha dhar dhaqidda iyo qalajiya in aad isticmaali kartaa euro ama laba, sidaa darteed uma baahnid inaad dhar aad u badan oo aad la qaadato midkood. Haddii aad rabto in badan oo ah alaabtii safraan, backpacking laga yaabaa in doorasho wanaagsan.
All oo dhan, safarka tareenka sida miyiga ah waa waayo-aragnimo u qurux badan oo kaaftoomi-free. Waxaad booqan kartaa meelo badan oo si fudud oo dhan ee guud ahaan dalalka qurux badan sida Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, iyo in ka badan. Dheeraad ah, aad hesho si aad u aragto baadiyaha qurux badan iyo Bbc cajiib ah dabeecadda leeyahay in ay bixiyaan. No kale ee doorashada safarka ku siin doonaa waayo-aragnimo aan la ilaawi karin oo xiiso leh oo caynkaas ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh isku xidhka si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#safarro	socdaalka Yurub	europetravel	talooyin	safarka tareenka	Tranride	tareenada	caarada tababarka	talooyin tareenka	tareen safarka	Talooyin safarka tareenka	safarka tareenka	safarka	safarrada